नेपाल आज | भोट माग्न ढलको पानीमा सुतेर फेसबुक लाइभ
भोट माग्न ढलको पानीमा सुतेर फेसबुक लाइभ
नेपालमा असार पन्ध्रको धान दिवसमा नेताहरुका अनेक चर्तिकलाले अहिले सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । चुनावमा पनि नेताहरुले यस्तैखाले अनेक चटक देखाउँछन् ।
उता पाकिस्तानमा पनि नेताहरु के कम ? अहिले आम चुनावको सरगर्मी बढिरहेको बेला पाकिस्तानमा एकजना नेताले जनताको मन र भोट आफुतर्फ तान्नका लागि अनौठो जुक्ति निकालेका छन्
चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेताहरु जनताका घरदैलो पुगेर भोट मागिरहेका बेला एकजना स्वतन्त्र उमेदवारले चाहीँ भोट माग्ने रोचक शैली अपनाएका छन्, जसले हाम्रो देशका वैकल्पिक भन्नेहरुका चटकको झल्को दिन्छ ।
ती नेताले ढलबाट निस्किएको फोहोर पानीमा पल्टिएर फोटो खिचे र त्यसलाई फेसबुक वालमा अपलोड गरे । फेसबुक वालमा फोटो हाल्नेमात्र होइन, उनले ढलको पानीमा सुतेरै फेसबुक लाइभ समेत समेत । उनले त्यसबेला हातमा पाकिस्तानी झण्डा बोकेका थिए । जसले अहिले निकै चर्चा पाएको छ ।
कराँचीको एन २४३ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडिरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार अयाज मेमोन मोतिवालाले आफुले जनताको दुखलाई राम्रोसँग बुझेको भन्ने देखाउनका लागि ढलमा सुतेका हुन् । आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरु ढलको समस्याबाट गुज्रिरहेको कुरा आफुलाई जानकारी रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार र विपक्षी दलहरुलाई नैतिक दबाब दिन आफुले यस्तो काम गरेको बताए ।
फेसबुकमा शेयर गरेको फोटोमा उनले लेखेका छन्, ‘सफाइ हाम्रो आधा इमान हो कि दुर्गन्ध ? मोतिवालाले जनताका लागि, दुर्गन्धबाट मुक्तिका लागि ढलको पानीमा उत्रिएर विरोध गरेको छ । भोट दिनुहोस्, सफाइ लिनुहोस्,। कृपया पाकिस्तानलाई बचाउनुहोस् ।’
स्मरण रहोस् चुनाव प्रचारप्रसारका लागि अनेक तरिका अपनाउँदै आएका मोतिवालाले फोहोरको डुंगुरका बीचमा गएर पनि भाषण गर्ने गरेका छन् । एजेन्सी
पाकिस्तान सामाजिक सञ्जाल रोचक